Fraport mepee ụlọ ọrụ ọzụzụ na ọdụ ụgbọ elu Ljubljana
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Fraport mepee ụlọ ọrụ ọzụzụ na ọdụ ụgbọ elu Ljubljana
Na abali isii nke onwa Mach, Fraport AG weputara ulo akwukwo ihe omumu nke nde for 6 maka Fraport Aviation Academy na Ljubljana Airport (LJU) na Slovenia. Traininglọ ọrụ ọzụzụ ọhụrụ a ga - ekwe ka Fraport Group gbasaa ọrụ ọzụzụ mba ụwa iji gboo mkpa na-eto eto site na mpụga na ndị ahịa ime - ọkachasị na mpaghara ọkụ ọkụ, ọrụ mberede, njikwa nsogbu, njikwa ala. N'ịbụ onye guzosiri ike na 6, Academylọ akwụkwọ ahụ dịzi mma iji jee ozi ahịa mba ụwa ma na-atụ anya ịnata ihe karịrị mmadụ 2016 so na ụlọ ọrụ ọzụzụ n'oge 500. Fraport Aviation Academy Training Center gosipụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 2019 square maka ohere maka klas, simulators na ndị ọzọ ngwá ọrụ pụrụ iche - gbakwunyere ebe dị n'èzí maka '' ibi ndụ '' ọzụzụ bara uru. Nke a ga-abawanye onyinye ọzụzụ maka ndị ọrụ nke Fraport Group, nke na-arụ ọrụ ugbu a na ọdụ ụgbọ elu 1,500 gburugburu ụwa.
“Karịa mgbe ọ bụla ọzọ, ụlọ ọrụ ụgbọelu chọrọ ndị ọrụ nwere nkà iji zute uto ụgbọ elu na nsogbu ndị ọzọ. Michael Müller, onye isi oche Fraport AG na onye isi ọrụ na-ahụ maka ọrụ ya kwuru na lọ Ọrụ Ọzụzụ Academylọ Akwụkwọ Ọzụzụ Fraport ọhụrụ anyị na-akpọga anyị n'ọkwa nke ọzọ n'izi ndị ahịa mpụga yana ndị ọrụ otu anyị n'ụwa niile.
Enyemaka nke otu enyemaka nke Slovenia ka o mepee azụmaahịa agụmakwụkwọ. Zmago Skobir, onye isi nchịkwa Fraport Slovenija kọwara, "facilitylọ ọrụ ọzụzụ ọhụụ na-anọchite anya itinye ego na-eto ma na-ewusi isi azụmahịa Fraport Slovenija na ọdụ ụgbọ elu Ljubljana ike."
Ndi otu ulo akwukwo Fraport Aviation ugbua n’enwe karia ndi oka mmuta 100 sitere na Fraport Group na ndi isi di nkpa, ndi n’emeputa ihe omumu ihe omumu. Ndị mmekọ kachasị ọhụrụ ga-adọrọ mmasị na Fraport Aviation Academy bụ Rosenbauer, onye ama ama amaara ngwa ọrụ ọkụ, yana Southern California Safety Institute (SCSI) - onye na - eweta ọrụ nyocha ihe mberede na ọrụ ọzụzụ nchekwa.
Ha sonyere ndị mmekọ Academy na Fraport Group, gụnyere FTC Frankfurt center ọzụzụ ọkụ na Fraport Twin Star na Bulgaria. Ndị mmekọ Slovenia gụnyere Boardgbọ Mberede ụgbọelu na Nchọpụta Mberede nke Slovene Armed Forces (Ministry of Defense), Adria Flight School, Slovenia Control (Slovenia's air traffic control), Mahadum nke Maribor's Faculty of Organizational Sciences, na Traininglọ Ọrụ Ọzụzụ nke Slovenia maka Nchedo Obodo na Enyemaka Ọdachi.
Thomas Uihlein, onye ntụzi nke Fraport Aviation Academy kwuru maka ọhụụ maka ọzụzụ: “Ebumnuche ogologo oge abụghị naanị ịnyefe ihe ọmụma na nka, kama ijikọ mpaghara dị iche iche nke ụgbọ elu na echiche mmụta jikọtara ọnụ. Ọhụụ anyị bụ ime ka Fraport Aviation Academy bụrụ onye ndu ngalaba na-ahụ maka ụlọ ọrụ ụgbọelu zuru ụwa ọnụ. ”
Texas bụ mba US kachasị ọhụrụ na ọdụ ojii Airbnb maka mmegide Israel
Njem mba ụwa na-emewanye ọganihu akụ na ụba
Ozi njem Russia
Citizensmụ amaala Russia 3.1 amachibidoro ịhapụ Russia maka ụgwọ akwụghị ụgwọ
Spanish Tourism Roma meghere mgbidi vidiyo 6 mita na Interactive Multimedia Center